Nhoroondo yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Muna 1987 mudzidzisi Andrew S. Tanenbaum akanyora bhuku rekuyunivhesiti pamasikirwo e operating systems, maakaronga huzivi hutsva: kuti zvaikwanisika "kuona" uye "kubata" matumbu ehurongwa chaihwo hwekushandisa, sechikamu chekudzidza kunoshanda kwemudzidzi. Asi kune zviri pachena matambudziko neiyo Copyright, Tanenbaum haina kukwanisa kudonha kumashure kwechero ipi yemaitiro ekushandisa aivapo panguva iyoyo, saka akafunga kunyora yakapusa, asi panguva imwechete yakakwana sisitimu yekushandisa, uye tsikisa kodhi yekodhi muapendikisi kubhuku rako.
Izvo hazvina kutora nguva refu vateveri veiyo system vakaonekwa, iyo yakatora zita re Minix uye izvo zvakafananidza system UNIX muchikamu chikuru, uye pakombuta yega yenguva iyo yakanga isina kana hard disk. Mumwe wevateveri ivavo aive Linus Torvalds.
Minix yaive nezvikwaniso zvishoma mukugadzirwa kwayo, zvekuti Torvalds yakasarudza pane imwe nguva kuinyorazve, kuti igoshandisa zvigadzirwa zvemberi zveiyo 80386 processor, iyo yaibvumidza kudyara chaiko ndangariro. Pakutanga, iyo sarudzo kune Minix aikwanisa kuita zvinhu zvishoma kwazvo, asi nekutenda kuputika kwechiitiko Internet izvo zvakatora nzvimbo nguva iyoyo, mazana evabatsiri akaonekwa pasirese vakanyora marudzi ese e vatyairi yeiyo nyowani yekushandisa system. Nenzira iyi, iyi nyowani system, yatove kuzivikanwa se Linux, yakava iyo UNIX dombo zvimwe zvakakwana zvemakomputa ako. Kutenda zvakare nekushandisa kwe GNU zvirongwa, chakapiwa Linux yezvakawanda zvekushandisa uye zvekuvandudza maturusi pasina kushandisa chero nguva kune iyo Software vezvokutengeserana.
Uye ndiwo mabudiro atinoita nzira yekushandisa vanhu vakaberekwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Nhoroondo yeLinux
@ lucasm86 akadaro
Mhoro. Ini ndiri muverengi weblog rino, uye neruremekedzo rwakafanira, ndinoda kutaura zvinotevera:
Ini ndinotenda kuti iwo ruzivo iwe urwo urikupa rwakanaka, asi kuti kune zvimwe zvinhu izvo zvisiri chaizvo sezvaunoreva kwavari.
Ichokwadi kuti Minix ndiyo yakatanga pfungwa yaTorvalds yekugadzira OS, asi zvirokwazvo kurudziro yayo huru ndeyeGNU. Muchokwadi, mune iyoyo yekutanga nhoroondo email, Linus anoti haatarisiri kuti chirongwa chake chive chakakura seGNU.
Uye zvakare, Linus anogona kutanga kuronga chirongwa chake, nekuda kwezvishandiso zvakagadzirwa neiyo GNU chirongwa, iri pamwe neBSD, yekutanga kugadzira OS yakaenzana neUNIX, asi yemahara.
Gare gare, Linux inosanganisirwa sekernel yeGNU inoshanda sisitimu. Ivo vanoenderana, kana kugona kurarama pasina mumwe. GNU ndiyo inoshanda sisitimu, iyo inopindura kune izvo zvinokumbirwa nemushandisi uye Linux ndiyo kernel, iyo inoshanda yakanangana ne Hardware. Iyo yakazara sisitimu inonzi GNU / Linux.
Pindura kuna @ lucasm86
Ndatenda nekomendi yako uye kujekeswa Lucas.